Howlgalka AFRICOM oo Balanqaaday inay sii wadayaan taageerada ay Soomaaliya siiyaan. - Latest News Updates
Howlgalka AFRICOM oo Balanqaaday inay sii wadayaan taageerada ay Soomaaliya siiyaan.
Taliska cusub ee Mareykanka ayaa sheegay inay sii wadi doonaan wada shaqeynta ay la leeyihiin mas’uuliyiinta Soomaaliya ee dagaalka lagula jiro argagixisannimada, ayuu yiri taliyaha cusub ee hay’addu.
Jeneral Stephen Townsend ayaa ballan-qaaday booqashadiisa Soomaaliya, tii ugu horreysay tan iyo markii uu xukunka qabtay 26-kii Luulyo.
Townsend ayaa yiri: “Waxaa iga go’an inaan ka wada shaqeyno oo aan hormariyo iskaashiga aan la leenahay Soomaaliya.”
“Annaga oo kaashanayna Soomaaliya iyo saaxibada kale ee caalamiga ah, waxaan ku dabaqi doonaa cadaadis joogto ah ururada xagjirka ah ee rabshadaha wata. Cadaadiskaani wuxuu abuurayaa shuruudo iyo fursado horumar siyaasadeed iyo dhaqaale oo dheeri ah. ”
Booqashada Townsend ayaa sidoo kale ah tii ugu horreysay ee uu ku tago qaaradda Afrika tan iyo markii uu la wareegay waajibaadka taliska ee AFRICOM.
Wuxuu kula kulmay Raiisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre magaalada caasimada ah ee Muqdisho, iyo sidoo kale safiirka Mareykanka ee Mareykanka Donald Yamamoto iyo hoggaanka sare ee millatariga Soomaaliya.
AFRICOM ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in safarka Townsend uu u ogolaaday inuu qiimeeyo xaalada Soomaaliya, uuna xoojiyo sida ay ciidamadu uga go’antahay sugida amniga gobolka.
AFRICOM waxay fulisay weerarro cirka ah oo ka dhan ah argaggixisada Soomaaliya toddobadii bilood ee ugu horreeyay sannadka 2019. Sida ku xusan tirakoobyada laga soo xigtay AFRICOM bishii hore, ciidamada Mareykanka waxay fuliyeen duqeynti 47-aad ee Soomaaliya 27-kii Luulyo si ay u bartilmaameedsadaan maleeshiyaadka Daacish ee looga shakisan yahay Kooxda Daacish ee ku sugan gobolka Buuraha Golis. , taas oo ah magac argaggixiso argagixiso oo la hubo.
Soomaaliya waxaa lagu soo rogay dagaal in kabadan 10 sano, oo ay geysteen kooxda xagjirka ah ee al-Shabaab. Dagaalku wuxuu dilay tobanaan kun kuna qasbay malaayiin kale inay ka cararaan guryahooda.
Wadamada Geeska Afrika ayaa weli ah mid ka mid dhibaatooyinka ugu weyn ee qaxooti ee qaaradda iyadoo malaayiin ka mid ahi ay ku nool yihiin qaxooti ahaan.
Ayadoo taageero laga helayo ciidamada gobolka iyo kuwa caalamiga ahba, Soomaaliya waxay heshay guulo ka dhan ah kooxda argagixisada, kuna qasabtay xubnaheeda inay dib ugu noqdaan dhuumasho.
Si kastaba ha noqotee, si kastaba ha noqotee, kooxdu waxay weli maareysaa inay soo bandhigto weerarro argaggixiso, oo inta badan ay adeegsadaan ismiidaaminta.
Booqashadiisa, Townsend wuxuu ku boorriyay ciidamada amniga Soomaaliya inay u baahan yihiin inay cadaadis saaraan al-Shabaab si ay uga xoreeyaan dadka Soomaaliyeed meelaha ay ku harsan yihiin ee al-Shabaab.